Mari-nehupfumi, 08 Chikumi 2016
Chitatu 8 Chikumi 2016
VeZanu-PF Youth League Vanoti VaMugabe Ngavatonge Kusvika Vafa
Vechidiki vebato reZanu PF mudunhu reManicaland vanoti vanoda kuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vafire pachigaro.
Kusagarira Maoko kwoPundutsa Chimwe Chizvarwa cheZimbabwe Chiri kuBritain
Amai Madosi-Falder, avo vakaenda kuEngland muna 2001, munhu akanga akadzidzira basa rekugadzira dzinhare mushure mekushandira kambani yenhare yeTel-One kuMsasa muHarare kwemakore akawanda.
Chikumi 07, 2016
Zimbabwe Tourism Authority Yokurudzira Vashanyi Kuti Vashandise maCard Pavanoshanya
Sangano re Zimbabwe Tourism Authority rinoti gadziriro ye musangano mukuru wepagore we Sanangani – Hlanganani iri kufamba zvakanaka uye vanyarikani vari kubva kunodzimwe nyika vatotanga kusvika.
Chikumi 06, 2016
VaManyenyeni Voferefetwa neNyaya yeKupinzwa Basa kwaVaMushore
Bato rinopikisa reMDC T rinoti riri kutambira danho rinonzi rakatorwa nekomisheni inorwisana nehuwori, yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZACC, rekuti makambani akawanda pamwe nevanhuwo zvavo vakaita zvehuwori vave kuongororwa.
Air Zimbabwe Yopedza Makore Mana Isina Kutambirisa Vatyairi veNdege
Vatyairi vendege kukambani yehurumende, yeAir Zimbabwe, nemusi weMuvhuro vakaudza komiti yeparamende inoona nezvezvekutakurwa kwezvinhu kuti havasi kuwana mari dzavo dzemihoro kubva muna2013 uye vari kupihwa mari yekubatsirikana chete kana kuti mallowances izvo zvave kuita kuti vamwe vavo vasiye mabasa vachienda kumakambani ekunze.
Chikumi 03, 2016
Varimi vekuBurma Valley Vobudirira neKurima Fodya
Varimi vefodya yerudzi rweBarley vekuno kudunhu reManicaland kunzvimbo yeBurma Valley vari kunzwa manyukunyuku zvichitevera kuvapo kwemusika wekutengesera fodya iyi munharaunda mavo.
Kushaikwa kweMari kuMabhanga Kwokanganisa Vakawanda
Dambudziko rekushomeka kwemari iri kuwanikwa kumabhanga emunyika rinonzi rave kukanganisawo makambani akawanda, sezvo achida mari zuva nezuva kuti akwanise kufambisa mabasa awo.